That's so good, right?: NO Regret (Part I)
ပြာလွင်နေသောကောင်းကင်ပြာပြာ ကြည်လင်နေသောရေပြာပြာရှိရာတောင်ကျစမ်းချောင်းထဲမှာ ကျွန်တော် လွတ်လွတ် လပ်လပ်ကူး ခပ်နေချိန် ဘ၀ဟာစမ်းရေကြည်လိုချိုမြိန်ပါရဲ့။ ချောင်းရိုးတစ်လျှောက်အားရပါးရကူးခပ်အပြီး သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ကိုပုံတူကူးဆွဲနေသူ အဖြူရောင်ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်ထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရှိရာကို
လှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ သီဟဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလေး နဲ့ ကျွန်တော် လိမ္မော်ခင်းကအပြန် အိမ်မပြန်သေးဘဲ အေးအေးသက်သာ ကြည်နူး ချိန်ယူနေကြတာနေ့စဉ်ပေါ့ ဒီချောင်းရိုးလေးမှာ။ ခဲပန်းချီကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ခြစ်နေတဲ့ သူ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်တဲ့အချိန် စာရွက်တွေကိုသိမ်းလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ပုခုံးပေါ်သူမှီလိုက်ချိန်မှာ ခံစားရတာက ရင်ထဲအဆုံးမရှိချမ်းမြေ့ခြင်းတွေ။ သူ့မျက်ဝန်းမှာ နှစ်လိုအားကိုးချင်းတွေ နွေးထွေးတဲ့အချစ်အင်အားတွေကိုမြင်နေရသလိုပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာ ကျွန်တော့်အချစ်ဆုံး သံယောဇဉ်အရှိဆုံး ဘယ်သူမှအစားထိုးလို့မရမဲ့သူ...သူပါပဲ။
အိမ်အပြန်လမ်းတလျှောက် ခပ်ဖြည်းဖြည်းနင်းလာတဲ့ ကျွန်တော့်စက်ဘီးနောက်မှာသီဟကိုတင်နင်း၊ သူကနောက်ထိုင်ခုံမှာ ခွထိုင်ပြီး ခါးကိုတင်းတင်းဖတ် နောက်ကျောကိုခေါင်းမှီထားတာကိုး။အင်း....နွေဦးလေပြေနဲ့အတူ လေလွင့်ရွက်ဝါကြွေတွေ ဝေ့၀ဲနေတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ နှစ်ဦးသားကြည်နူးနေရချိန်ဟာ သိပ်မကျန်တော့ပါလား။ ကောလိပ်တက်ဖို့ငွေကြေးပြည့်စုံအောင် မြို့တက်ပြီး ငွေရှာရမယ်.. ..ကျွန်တော့် ရှေ့ရေးအတွက်။
ကျောပြင်ပေါ်မှာ စိုစွတ်မှုကိုခံစားရတော့ စက်ဘီးနင်းတာကိုရပ် နောက်ပြန်လှည့်အကြည့်မှာ သူ့မျက်ဝန်းတွေက မိုးတွေရွာ နေပါလား....." မငိုပါနဲ့လားကွာ. ..ငါလည်းမင်းနဲ့ဒီလိုအမြဲနေ ချင်တာပါပဲ။"သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းလေး စကားနားထောင်တယ် မျက်ရည်တွေကိုသုတ်ပြီး အပြုံးတွေနဲ့ပြန်လည်စိုပြေစေ တော့တာ ချက်ချင်းလိုပဲ။ သူ့အိမ်ကိုရောက် တော့ စကားမဆိုဖြစ်ကြဘူး တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားတယ်အိမ်ခန်းထဲကိုလေ။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှမပြောဖြစ်ပေမဲ့ မျက်ဝန်းမှာ ပုလဲတွေခိုသီလာတာ မျက်တောင်များကိုခပ်သွက်သွက်အလုပ်ပေးရင်း စက်ဘီးကိုဖိနင်းရင်း....ဟား..။
အမေရယ် အဖေရယ် ညီလေးရယ် ညစာကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စားသောက်ဖြစ်ရင်း နက်ဖြန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာ တွေကိုသာ အာရုံစိုက်ကြတယ်။အဖေကသားတစ်ယောက်တိုးတက်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေများနေပုံပဲ။ဒီမှာဆို ရွာကစိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသာ လုပ်ကိုင်နေထိုင်သွားရမှာ။ မြို့ကြီး...မြို့ကြီးဆိုတာ တောနေလူတွေအတွက် အိပ်မက်မဟုတ်လား လေ။ အမေကတော့သားနဲ့ခွဲရမှာမို့ မျက်ရည်စမ်းစမ်းနဲ့ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေကို ပုဂံထဲထည့်ပေးနေလေရဲ့။ ကျွန်တော့် ညီလေးကတော့ အစ်ကို့ကို အားကျတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့ အဲဒီညချမ်းလေးမှာ။ ကျွန်တော် ကရော မိဘတွေ မောင်ဖွားတွေနဲ့ခွဲရမှာကို ၀မ်းနည်းနေသလား သီဟနဲ့ခွဲရမှာမို့ လစ်ဟာနေသလား နက်ဖြန်နေ့ရက်တွေ အတွက် ရင်ခုန်နေ သလား ရောထွေးနေတဲ့စိတ်နဲ့ ရင်ထဲမှာဟာတာတာ။
အင်း....အ၀တ်အစားတွေထည့်ပြီးပြီ ငွေအနည်းငယ်လည်းထည့်ပြီးပြီ အမေ့ရဲ့မှာတမ်းကိုလည်းစာအုပ်လေးထဲချရေးပြီးပြီ။ ဒီငွေရောင်သော့တွဲ.... သော့တွဲငယ်လေး..အထက်တန်းကျောင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်လေးတစ်ရက်မှာ ပေးခဲ့တဲ့သူ့လက် ဆောင်လေးရယ်ပါ။ အတူပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ နေ့ရက်အမှတ်တရဓာတ်ပုံတချို့ကို အတန်ကြာစိုက်ကြည့်မိရင်းအားလုံး အားလုံးကို အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။
"ငါ့သားထမင်းကိုဝအောင်စားနော်၊ မြို့မှာအဆင်မပြေရင် အမေ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့။"တဲ့ အမေရယ်မျက်ရည်ဝဲရင်းဆိုပြန်တယ်။
"ကိုကြီး ကျွန်တော့်အတွက် ဖတ်စာအုပ်လေးတွေဝယ်ထည့်ပေးလိုက်နော်။"လို့ ညီလေးကမှာတမ်းချွေတယ်လေ။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းလေးကရော စကားတစ်ခွန်းမှ မဆိုတော့ဘူး ကျွန်တော်သွားလာလှုပ်ရှားနေတာကို မျက်တောင် မခတ်တမ်း လိုက်ကြည့် စိုက်ကြည့်တယ်၊ အထုပ်အပိုးတွေကိုကိုင်တွယ်ပြီးလိုက်ပို့ဖို့ပြင်တယ်။မိဘတွေရှေ့မှာ ဒီထက် ပိုလို့မရတော့တာမို့ မျက်ဝန်းတွေကသာ စကားဆိုရင်းပေါ့နှုတ်ဆက်... .နှုတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစား..။ ကိုယ်မင်းကိုအမြဲသတိရ နေမှာပါ မင်းကိုသာအချစ်ဆုံးပါ မင်းကိုကိုယ့်အတွက် လေကိုလိုအပ်သလိုကို လိုအပ်ပါတယ်။မှာတမ်းတွေမချွေပါနဲ့ ကိုယ်လည်းမှာတမ်းစကားမပြောတော့ပါဘူးနော်။
ဒီအ၀ါရောင်လမ်းလေး..လမ်းသွယ်လေးထဲ ဘယ်အချိန်ပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုတာမသိသေးဘူး။ သွားစမ်း ဒီသစ်ရွက်ကြွေ တွေ....ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် မကျကြစမ်းနဲ့။ဒီမျက်ရည်တွေကရော ဘာကိစ္စကျနေရတာလည်း...ငါ...ငါ သေရွာကိုသွား နေတာမှမဟုတ်တာ။
လေနုအေးတွေ တိုက်ခတ်မယ့် အာရုဏ်သစ် မြို့ကြီးဆီကိုသွားရမှာပဲ။ လက်တွေဝှေ့ယမ်းနေတာ သူတို့မျက်ဝန်းတွေမှာ ခွဲခွာရခြင်းကိုခံစားနေကြရတာတွေက ကျွန်တော် အ၀ါရောင်လမ်းလေးကနေ......အနီရောင်လမ်းမပေါ် ခြေလှမ်းတွေတင်ဖို့ တွန့်ဆုတ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲ။
ခပ်မြင့်မြင့်ရှိနေတဲ့ တောင်ကုန်းကတစ်ဆင့်အဆင်းမှာတော့ မြို့ကြီးသယ်ဆောင်သွားမယ့် ဘူတာကြီးရှိပါတယ်။ လူတွေများအုပ်စုလိုက်သွားနေကြတာ များမှများ။ ဒီတော့ကျွန်တော်လည်း ခပ်သွက် သွက်သွားမယ် ခြေလှမ်းတွေကို သွက်လိုက်စမ်း.....နှောင့်နှေးမနေနဲ့တော့ကွာပေါ့။
“တူ..တူ” ခုတ်မောင်းလာတဲ့ ရထားကြီး ဘူတာကိုဆိုက်ရောက်လာတော့ ကျွန်တော် လက်မှတ်ကိုအသင့်ပြင်ရင်း ရထားပေါ်ကို တစ်လှမ်းခြင်း..တစ်လှမ်းခြင်း..ခြေထောက်တွေက အပေါ်မရောက်ချင်တော့ဘူးထင်ရဲ့ လေးကန်လိုက်တာ။
ကျော်ကျော်...မြို့ရောက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ဦး။ရွာကထွက်ခွာသွားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘော်ဒါအသိတစ်ယောက်ပေါ့။ သူ့ ဆက်သွယ်ပေးမှုကြောင့် နို့ဘူးတွေကို ပက်ကင်ထည့်ပေးတဲ့စက်ရုံမှာအလုပ်ရခဲ့ပါတယ်။ ရောက်ခါစမှာတော့ သိပ်အဆင် မပြေသေးပေမဲ့ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်... အလုပ်ဟူသမျှ ကျွန်တော့်အတွက်ဂုဏ်ရှိစွမဟုတ်လား။
တရွေ့ရွေ့လည်ပတ်နေတဲ့ ပတ်လမ်းပေါ်မှာ တရွေ့ရွေ့လည်ပတ်နေတဲ့နို့ဘူးလေးတွေက အစီအရီ။
ညနေ၅နာရီဝန်းကျင်မှာ လည်ပတ်နေတဲ့စက်ရုံကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်လို့။ကိုယ်စီကိုယ်စီ ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရင်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘာလည်းတော့မသိဘူး။ ပျော်ရွှင်တာလား.....အားရတာလား အလိုလိုမြောက်နေ သလိုပဲ... .အလုပ်လုပ်ရလို့လား...ပြောပါဦးဗျ။
လမ်းမတစ်လျှောက် လျှောက်လာရင်း အင်တာနက်ကဖေးကိုခဏ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေရှာဖွေဖို့ပေါ့ဗျာ။ ”တီ...တီ” ရုတ်တရက် လက်ထဲကိုင်ထားတဲ့ ဟမ်းဖုန်းကအသံမြည်လာတယ်...သူငယ်ချင်းလေး သီဟဆီကပေါ့။ လွမ်းကြောင်း..... မြို့ပေါ်မှာ လူရှုပ်တွေ များသတဲ့၊ သူကိုသတိရပါဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလေ။သူပြောသလို မြို့က မာယာများမယ် မထင် ပါဘူး...ပျော်စရာပါ။
အိမ်နား....သူငယ်ချင်းကျော်ကျော်ရဲ့ အိမ်ခန်းနားရောက်တော့ စတိုးဆိုင်ထဲဝင် ခေါက်ဆွဲထုပ်တွေ၊ မုန့်တွေ.....နို့ဘူး.. ..အင်း...ကိုယ့်စက်ရုံ ကထုတ်တဲ့နို့ဘူးကိုယ်ပြန်ဝယ်သောက်ရပြန်တယ်။ပြီးတော့လည်း ပိုက်ဆံအိတ်လေးကို ဂရုတစိုက်.. ..ပြန်ထည့်ရတယ်...မြို့မှာငွေကအရေးကြီး သမို့လေ။
အိမ်အပြန်လှေကားတွေပေါ်ခက်သွက်သွက်တက်ရင်း မြင်ရတာကတော့ တိုက်ခန်းတွေက ဒီလိုပဲ ကျဉ်းမြောင်း နေသလို... အသက် ရှူကျပ်သလို ထင်ရတဲ့ ခံစားရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ။ ဒါဟာမြို့ပြဆိုတဲ့....မြို့ပြပါပဲ။ ဒါဟာအရေးကြီးသလား အခုအချိန် မှာ မစဉ်းစားနိုင်သေးပါ။ ကောလိပ်တက်ဖို့ ပိုက်ဆံစုမိဖို့သာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဆိုတော့။ ညနေခင်းအခန်းထဲမှာကျော်ကျော် တစ်ယောက် အပြတ်ရှိုင်းနေလေရဲ့။သူ့မျက်နှာမှာ အပြစ်အနာအဆာရှာနေသိအလား မှန်ကိုစိုက်ကြည်နေတော့တာ။
"ငါလား....ငါညပိုင်းအလုပ်လုပ်မယ့် ဘားကိုသွားမလို့လေ၊အဲဒီမှာလုပ်ရတာကောင်းတယ်ကွ၊မင်းလည်း ကောလိပ်အတွက်ငွေစုနေတာ မလား...ငါနဲ့လိုက်ခဲ့မလား။"
"ဟုတ်လား...တကယ်လားကွ..မင်းအဲဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာအိုကေတယ်ဆိုရင် ငါလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ငါ့ကောင်ရ အဲဒီလောက်ဆိုတော်လောက်ပါပြီကွာ မင်းကသန့်ပြန့်ပြီးသားပဲဟာ"
"ဒီလောက်သန့်မှ အလုပ်ကအိုကေမှာကွ....စကားမစပ် မင်းကိုပြောပြရဦးမယ်၊ နိုက်ကလပ်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တုန်းက မမတစ်ချို့နဲ့ လိုက်လိုက်သွားတော့ ငါ့လက်ကိုကိုင်ကြည့်ပြီး ကြမ်းတယ်နော်တဲ့။ ကျွန်တော်က ဂေါ့ဖ်ကစားလို့ပါလို့လိမ်ပြော ရတာပေါ့ကွာ၊ ငါ့ကိုယ်ငါသိပါတယ် ငါကလူချောပဲ ဟုတ်တယ်မလား.. ဟား...ဟား"။
ဒီကောင်တော်တော်တော့ မလွယ်ဘူး။ငွေတော့အဆင်ပြေပုံပါပဲ....ညပိုင်းကလပ်မှာအလုပ်သွားလုပ်တာ အဲဒီလောက် သန့်ပြန့်ဖို့ လိုသလားတွေးမိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ နေ့ပိုင်းအလုပ်အပြင် ညပိုင်းအလုပ်ပါအဆင်ပြေရင်တော့ ကောလိပ် တက်တဲ့ အခါစိုပြေမယ်ထင်ပါရဲ့။
ရေပန်းကတစ်ဆင့်ကျလာတဲ့ရေမှုန်ရေမွှားတွေ....ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိခတ်တာအဆက်မပြတ်။စိတ်ထဲမှာတော့ ရေချိုးနေတာ ကိုမေ့မေ့ လျော့လျော့ကိုဖြစ်လို့။ အတန်ကြာရေချိုးပြီးမှ ရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာမိတယ်။ "တီ....တီ"ကုတင်ဘောင်ပေါ်တင်ထားတဲ့ ဟမ်းဖုန်းလေးက အသံမြည်လာတော့ ဘယ်သူ့ဆီကများလည်း...။
အချိန်မဆိုင်းအ၀တ်တွေခပ်သွက်သွက်လဲရင်း သီးသန့်လူကုံထံသူဌေးရပ်ကွက်တစ်ခုက အရက်ဘားကိုအမြန်သွားရတာပေါ့။ ကိုယ်ရတဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်လေးကို တာဝန်ကျေပွန်မှကောင်းတာလေ။ တံခါးကိုအသာတွန်းဖွင့်လိုက်စဉ် မီးရောင်မှိန်မှိန်ထွန်း ထားတဲ့ ဘားအတွင်းမှာ မွှေးရနံ့တစ်ချို့သင်းပျံ့နေပါရဲ့။ ကိုယ်စီကိုယ်စီ စားပွဲဝိုင်းတွေမှာအေးအေးသက်သာ အပန်းဖြေနေ ကြတဲ့ လူတွေကအများသား။ ဟော.....ပြောထားတဲ့ခုံနံပါတ်မှာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချသောက်နေတဲ့ ခပ်သန့်သန့်လူရွယ်တစ်ဦး။ သူ့ကိုကြည့်ရတာ ဘာကိုများ စိတ်ဆင်းရဲနေပါလိမ့် သူများတွေလိုမဟုတ်တစ်ယောက်တည်း။
သူ့ဆီကစကားသံသိပ်မကြားရဘူး။စကားမဆိုနိုင်လောက်အောင်များကြီးကျယ်နေတာလားမသိ။ နောက်တော့မှ ပက်ကင် နံပါတ် ၃၃၆မှာ ထိုးထားတဲ့ကားကိုသွားမောင်းယူလာပြီးစောင့်ဖို့ပြောကာ ကားသော့ကို ပေးတာ...မော့ကြည့်တဲ့ သူ့မျက်ဝန်း တွေကတစ်မျိုးပဲ။
ညှင်းသွဲ့သွဲ့တိုးဝင်လာတဲ့နွေဦးလေပြေတွေနှင့်အတူ ရွက်ကြွေတွေကို သူငေးကြည့်နေသလား ဘာတွေကိုတွေးနေပါ သလည်း။ ချစ်သူသက်ထား ကိုသတိရနေတာလား။ ငါနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးလေ.... နောက်ကြည့်မှန်ကတစ်ဆင့်အကဲခတ် ကြည့်တော့ သူ ကျွန်တော့်ကိုစိုက်ကြည့် နေသလိုပဲ။
"ဆောရီး...ဒီအခွေလေးထည့် လိုက်မယ်ဗျနော်..။" လို့ပြောရင်းသီချင်းစီဒီလေးကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်ဖွင့်စက်ထဲကိုပေါ့။
ငြိမ့်ငြိမ့်ငြောင်းငြောင်းထွက်လာတဲ့ ဂီတသံနဲ့အတူသူကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုတစ်ခုရသွားတယ်ထင်ပါ့. ..အပြုံးတစ်ခုတွဲလွဲခို လာတယ် သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ။ ကားကိုဂရုတစိုက်မောင်းနှင်ရင်းမြို့စွန်ကနေမောင်းထွက်လာကြတယ် သူ့အိမ်ခန်းရှိရာ မြို့တွင်းကိုပေါ့။ ကားကလည်းကောင်းလိုက်တာ ငြိမ့်နေတာပဲ.....ကိုယ်ပိုင်ဘယ်တော့များမှရမလည်း....ဒီလိုကားလေးကို မောင်း ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခန်းနဲ့ ခန့်ခန့်ထည်ထည် ကောလိပ်တက်ရရင် သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲစတားပဲ။
"ကျွီ...."ဆိုတဲ့တံခါးပိတ်သံနဲ့အတူ သူ့အိပ်ခန်းထဲကထွက်လာတယ် ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကိုင်ရင်းပေါ့။ ပိုက်ဆံကလုံလုံ လောက်လောက် မထည့်လာမိလို့တဲ့။ ဒီလူကြည့်ရတာ ပိုက်ဆံ နေထိုင်မှု အလုပ်အကိုင်ပြည့်စုံနေ ရဲ့သားနဲ့ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလည်း ခံစားချက်မျက်ဝန်းတွေနဲ့။ အလုပ်အကိုင်အကြောင်း ဘယ်မှာနေတာတွေမေးနေသေးတယ် အဲဒါသူနဲ့ဆိုင် လို့လား သူများအကြောင်းကိုစပ်စုတာ စိတ်အတိုဆုံးပဲ။ "ဟေ့...မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လည်း...အချိန်ရရင်အတူသောက်ရ အောင်လား။" ကျွန်တော်မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ အခန်းလှေကားနားအရောက် သူ့အခန်းဖက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ၀ရန်တာကနေကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေဆဲ၊ သူ့ကိုကြည့်မှန်းသိတော့ လက်လှမ်းပြတယ်.. .သွားကွာ....ဘာ မှန်းမသိ။
မနက်ခင်းလေပြေတွေနဲ့အတူ မအေးစက်နိုင်ဘဲ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေ ဘောလုံးကစားဖြစ်ကြတယ်။အလုပ်နားချိန်မှာလေ။ ကျော်ကျော်ရယ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ချို့ရယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ဗျာ။အလုပ်ထဲစိတ်နှစ်ထားသမျှ အခုမှစိတ်ထဲ နည်းနည်းပေါ့သွားတော့တယ်။ပြီးတော့ အလုပ်ဆက်လုပ်ကြပေါ့။ညနေရောက်တော့ အလုပ်ဆင်းတဲ့အခါ ကျော်ကျော်က သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဘားအကြောင်း မင်းအတွက်အလုပ်တစ်နေရာစာပြောခဲ့ကြောင်းပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အလုပ်အကိုင် အကြောင်း ကောလိပ်အတွက် ငွေစုဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်စကားတွေဆိုရင်း နှစ်ဦးသားအလုပ်ဆင်း ဖို့ပြင်ဆင်ပြီး ထွက်လာကြတယ် စက်ရုံထဲကနေလေ။
အဲဒီအချိန် စက်ရုံတံခါးနားမှာ ကားခပ်သန့်သန့်တစ်စီးထိုးစိုက်လာတယ်...ပြီးတော့ ကားထဲမှလူရွယ်တစ်ဦးဆင်းအလာ စက်ရုံမှူးတွေ ဘာတွေက ပြာပြာသလဲကြိုကြပြုကြနဲ့။ ဘယ်သူမှန်းတော့မသိဘူး.....။ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်မိတော့ သူကျွန်တော့်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေရင်း စကားပြောဖို့ကြိုးစားတာလားမသိ ကျွန်တော်ရှိရာလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့် လုပ်ရင်း လှမ်းလာတယ်။ ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ဘဲ ဆက်လျှောက်အလာ ကျော်ကျော်က "ဆွေမင်း....အဲဒီလူက CEO ရဲ့သားလေ။ မင်းဒီထက်ကောင်းတဲ့ရာထူးရချင်ရင် အတည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်ရင် သူကထောက်ခံပေးနိုင်တယ်ကွ။ သူနဲ့သွားစကား ပြောပြီး မင်းရဲ့အကြောင်းပြောပြကြည့်ပါလား အကူအညီရလိုရငြားပေါ့ကွာ။"
စိတ်ထဲထောင်းကနဲ ဒေါသထွက်သွားမိတယ်။ ကျော်ကျော်က ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ပြောတာမှန်ပေမဲ့ ကျွန်တော်အဲဒီလောက် နိမ့်ပါးနေသူမှမဟုတ်တာ၊ကိုယ့်ဝင်ငွေနဲ့ ကိုယ်ရပ်တည်ဖို့ကြိုးစားနေသူပဲဗျ။အလုပ်တစ်ခုမှာ လူတစ်ယောက်ထောက်ခံပေးမှ တည်မြဲမှာလား၊အဲဒီလူကြည်ဖြူမှ ရာထူးတိုးမတဲ့လား..သွားစမ်းပါ။
လှေခါးလေးကနေတစ်ဆင့် ခပ်မိုက်မိုက်ရုံးခန်းတစ်ခန်းထဲကို ၀င်လာဖြစ်တယ်နောက်တနေ့မှာ။ စားပွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူဟာ ကျွန်တော်ဝင်လာတာကိုမြင်တော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေမှာ အပျော်ရိပ်တွေထင်းလာတယ်။ "မင်းနဲ့ပြန် တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ကွာ၊ မင်းဒီစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်နေတာလား။ ငါဘာကူညီပေးနိုင်မလည်းမင်းအတွက်။ ဟောဒီမှာ ငါ့ရဲ့လိပ်စာကဒ်။" ကျွန်တော်လာရင်းကိစ္စကို မပြောဖြစ်သေးဘူးသူ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်း စိတ်ထဲဘာကိုမှန်းမသိ မကျေနပ်ဖြစ်နေတာ။ သူ့လိပ်စာကဒ်ကိုလှမ်းပေးတော့... ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲ သူ့အခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။ သွားစမ်းကွာ...လက်အိပ်တွေ ၀န်ထမ်းဝတ်စုံတွေချွတ်ပြီး စက်ရုံထဲကထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။ ငါ့ကိုဘာထင်နေ သလည်းမသိပေါ့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ခံစားခဲ့ရတာက။
ဟား..........အသက်ခပ်ပြင်းပြင်းရှူရင်းတောင်ကုန်းလေးပေါ်ရှိအိပ်ခန်းကျဉ်းလေးကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲကရှိ တာလေးတွေ ထုတ်ပြုပြီးချက်ပြုတ်၊ပြီးတော့ထမင်းစားရင်း...ကျော်ကျော်ပြောတဲ့ဘားခန်းကို လှမ်းဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ လာခဲ့ပါတဲ့လေ.....။ ရေမိုးချိုးသန့်ပြန့်အောင်ပြင်ပြီး စစ်မြေပြင်တစ်ခုကိုထွက်ခွာလာရသလို လှမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်ကြားလမ်းတွေရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တစ်ခုရဲ့ ခပ်မှောင်မှောင်လမ်းသွယ်လေးကတစ်ဆင့်ဝင်လာခဲ့တာ ဟောတွေ့ပါပြီ နီယွန်မီးတွေ လင်းနေတဲ့ ကားတွေစီရီနေတဲ့ ကလပ်ဘားတစ်ခု။ရင်ခုန်ဖွယ် ဂီတသံတွေထုံမွှမ်းထားတဲ့ ကပွဲကြမ်းပြင် စားသောက်နေသူတွေ အစီအရီ ကာရာအိုကေအခန်းများက အဆိုဝါသနာရှင်တို့အတွက် ကလပ်ရဲ့ နောက်ပိုင်းအခန်း တွေမှာ။ ၀န်ထမ်းအုပ်ချုပ်တဲ့မန်နေဂျာဆီရောက်တော့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးသူစိုက်ကြည့်ရင်း ကြောင်ပြုံးပြုံးပါရဲ့။ ...ဘာကြောင့်လည်း။
Wrote by Alex @ Zar Ni
Ref: No Regret (korean movie)
Posted by Alex Aung at 12:50 PM